Ugu Weyn Ee Anthracnose
Iyada oo la soo gooyay jeeriga goobtaada, waa inaadan is dejin. Geedka, inkasta oo ay fududahay in la helo xididaha cirqiga, waxay aad u nugul yihiin cuduro kala duwan iyo cayayaanka. Beeraley kastaa waxay la kulmayaan si dhakhso ah ama ka dib, sababtoo ah ma suurtageli karto in ay ka badbaadiso dhibaatooyinkan. Dhacdooyinkooda waxaa saameeya waxyaaba la saadaalin karo (cimilada, tiknoolojiyada beeraha) iyo aan la saadaalin Karin (dhaawacyada shilalka, iwm.).
Cudurrada lafdhabarta iyo sida looga hortago
Cudurrada citrus, taas oo minaayadu iska leh, waa ilaa xad gaar ah, iyo ilaa xad ah sifooyinka dhirta badan oo miro. Xaaladaha intooda badan, cudurrada geedka mareenka waxaa keena jeermiska: mycoplasmas, viruses, bakteeriya, fungi. Natiijada falalkooda waa cillado kala duwan oo ku saabsan geedka iyo miraha: koritaanka, boogaha, kalluumeysiga, caajis, iyo wixii la mid ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Anthracnose 2019